Ogaden News Agency (ONA) – Dood-Cilmiyeed ku saabsan Xalinta Dhibaatooyinka Bulshada iyo Raadinta Cadaalad Dhab ah.
Dood-Cilmiyeed ku saabsan Xalinta Dhibaatooyinka Bulshada iyo Raadinta Cadaalad Dhab ah.
Professor Nadarajan Sethuraju oo bare ka ah jaamacada Metropolitan State Univesity qaybteeda School of Law Enforcement and Criminal Justice ayaa maanta u qabtay xubno ka mid ah ururka OYSU Minnesota dood-cilmiyeed ku saabsan Xalinta Dhibaatooyinka Bulshada iyo Raadinta Cadaalad Dhab ah.
Professor ka oo takhasuskiisu yahay cilmiga bulshada iyo cadaalada ayaa si heersare ah uga hadlay wacyi galinta bulshada iyo qaabka loo wajihi karo. wuxuu si fiican uga hadlay caqabaha iyo dhibaatooyinka inta badan ay la kulmaan ururada iyo xubnaha howl wadeenada ah marka ay xal u raadinayaan dhibaato haysata bulsho sida Ogaadeeniya oo kale. Tasoo kaga imaanaysa dadka iyo dowlahada dhibka wada. Hadaba arintaas waxay u baahan tahay dulqaad, dadaal iyo adkaysi dheer ah ayuu yidhi Professor-ka.
Maruu si gaar ah uga hadlayey xaalada Ogaadeeniya wuxuu yidhi professor Nadarajan ” xaalada Ogaadeeniya waxay ubaahantahay dulqaad, adkaysi iyo dadaal dheeraad ah idinka oo wacyigalina u samaynaya bulshada aad ku dhex nooshihiin markasta iyo meelkasta oo aad joogtaan gaar ahaan idinka oo adeegsanaya saaxiibo khaas ah oo aad qadiyadina u samaysaan”.
Hadaba ururka dhalinyarada OYSU ee gobolka Minnesota oo mudoonyinkan dambe ku mashquulsan barmaamijyo kor loogu qaadayo tayada iyo waxqabadanka xubnihiisaa ayaa aad uga faaiidaystay doodcilmeedka professor Nadarajan Sethuraju iyaga oo balanqaaday in ay siiwadidoonaan kobcinta wacyiga xubnaha iyo siminaarada aqoon korodhsiga ah ee laxidhiidha qadiyada Ogaadeeniya iyo tayo galinta howlaha halganka.
Ugu dambaytii dhalinyarada oo mudo dheer kadooday howlaha halgan waxay islagarteen in talaabo xoog leh horay looqaado iyada oo wakhti dheeraad ah laganayo wacyigalinta iyo lasocsiinta siyaasiyiinta iyo ururada bulshada ee gobolkaMinnesotadhibaatooyinka kadhacaya Ogaadeeniya. Kadibna cadaadis lagu saaro in ay waxkaqabtaan dhacdoonyinka xad dhaafka ah ee ayEthiopiaiyo gacanyarayaasheedu kuhayaaan shacabka masaakiinta ah ee reer Ogaadeeniya.